Kismaayo News » Shabaabka oo tuulada Diif la wareegay
Shabaabka oo tuulada Diif la wareegay
Kn: Maleeshiyada Alshabaab ayaa saaka xili hore dagaal la’aan kula wareegay gacan ku haynta tuulada Diif oo ku taalla soohdinta taasi oo u dhaxaysa magaalooyinka Dhoobley iyo Ceel-waaq. Sida ay wararku tibaaxayaan maamulka magaalada oo ka warhelay duulaanka ay Shabaab ku soo yihiin ayaa magaalada sii faarujiyay oo gabi ahaanba isaga baxay, sidaasna ayadoon dagaal ka dhicin waxaa la wareegay maleeshiyada Alshabaab.
Ciidamo isla saaka ka baxay magaalada Dhoobley ayuu maamulka Jubbaland amar ku siiyay inay dib uga noqdaan, waxaana la sheegayaa in Maraykanku dalbay in loo daayo inuu marka hore duqaymo la bartilmaameedsado. Wararku waxay intaasi ku darayaan in ninka hogaaminayay weerarka Diif uu ahaa nin ay Maraykanku aad u doonayaan.
Warar hadeer nasoo gaarayna waxay xaqiijinayaan in Shabaabku isaga bexeen magaalada kadib markii ay qaateen agab u badan raashin iyo shidaal. Magaalada ayaa caawa haawanaysa oo labada dhinac midkoodna ku sugnayn.
Diif oo ah marin muhiim ah ayay marar badan oo kala gadisan Shabaabku gacanta ku dhigeen laakiin ay isaga baxaan maadaama aysan haysan karin. Maamulka Jubbaland ayaysan ka joogin ciidamo ka badan ilaalada maamulka magaalada, waxaana markasta looga gurmadaa magaalada Dhoobley oo masaafo u jirta.